बलिउडमा अहिलेकी सर्वाधिक महँगी हिरोइन को होलिन् ? ती हिरोइनले प्रतिफिल्म कति पारिश्रमिक लिन्छिन् होला ? – mero sathi tv
बलिउडमा अहिलेकी सर्वाधिक महँगी हिरोइन को होलिन् ? ती हिरोइनले प्रतिफिल्म कति पारिश्रमिक लिन्छिन् होला ?
On ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०८:२७
बलिउडमा अहिलेकी सर्वाधिक महँगी हिरोइन को होलिन् ? तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, ती हिरोइनले प्रतिफिल्म कति पारिश्रमिक लिन्छिन् होला ?
हो, बलिउडकी अहिलेकी सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने हिरोइन हुन्, दीपिका पादुकोण । आफू अभिनीत फिल्म एकपछि अर्को गर्दै हिट भएका कारण उनले पारिश्रमिक बढाएको चर्चा बलिउडमा छ । पछिल्लो समय उनी अभिनीत पद्मावत हिट भएको थियो । पद्मावतमा उनलाई निर्माता, निर्देशक सञ्जयलीला भन्सालीले एघार करोड भारु पारिश्रमिक दिएका थिए ।
पद्मावत सफल भएपछि दीपिकाले आफ्नो पारिश्रमिक १२ देखि १४ करोड भारुसम्म पुर्‍याएकी छिन् । पारिश्रमिक बढाउँदा पनि दीपिकालाई आफ्नो फिल्ममा लिन निर्माता, निर्देशक लालायित नै छन् ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
दीपिकापछि महँगो पारिश्रमिक लिने हिरोइनमा पर्छिन्, कंगना रनाओत । भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेअनुसार कंगनाले १२ करोड भारुसम्म लिने गरेकी छिन् । कंगनाकै हाराहारीमा पारिश्रमिक लिन्छिन्, प्रियंका चोपडा पनि । अर्की हिरोइन करिना कपुरले एउटा फिल्ममा अभिनय गरेबापत १० करोड भारुसम्म पारिश्रमिक लिने गरेकी थिइन् । तर, आमा बनेपछि भने उनको बजार घटेको छ ।
भारतीय अनलाइन मिडियाले हिरोइनले लिने गरेको पारिश्रमिकका बारेमा रिपोर्ट तयार गरेको छ । जसमा अनुष्का शर्माले प्रतिफिल्म ८ करोड भारु, क्याट्रिना कैफले ७ करोड, आलिया भट्टले ७ करोड, सोनाक्षी सिन्हाले ५ करोड, श्रद्धा कपुरले ५ करोड, परिणीति चोपडाले २ करोड, ज्याक्लिन फर्नान्डिसले डेढ करोड, वाणी कपुरले १ करोड भारु र कृति सेननले ७० लाख भारु पारिश्रमिक लिने गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, भूमि पेडनेगर र तापसी पन्नुले ५० लाख भारु पारिश्रमिक लिने गरेका छन्।
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की आमा बन्दै
विमान दुर्घटना भएको २ दिन पछि बंगलादेशले राख्यो यस्तो कडा अडान